Ecommerce Plugin Maka WordPress: WooCommerce | Martech Zone
Ọ bụrụ n’inwebeghị ohere iji rụọ ọrụ na WooThemes, ndị otu ịtụnanya isiokwu maka isiokwu WordPress, ị kwesịrị. Ha na-arụ ụfọdụ ọrụ dị ịtụnanya. Anyị na ha nwere ndị nrụpụta ngwugwu ha obere oge tupu anyị amalite iwulite usoro omenaala site na ala.
WooThemes weputara nke di ocha, saa mbara ma di mfe iji ecommerce mwekota maka WordPress, na-akpọ WooCommerce:
Ọ dị ka nnukwu folks na WooThemes na-enyefe ngwa mgbakwunye ecommerce maka WordPress, ma na-enye WooCommerce gburugburu dị ka zụọ na ndenye aha nhọrọ… nke ahụ bụ ọmarịcha azụmahịa! Mara - ndị a bụ njikọta njikọ na koodu coupon na post a.
Tags: WordPress ecommercewordpress ịzụ ahịa ụgbọ